२०७८ पौष ३० शुक्रबार ०७:०९:००
सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर काम गर्ने शिक्षण अस्पतालमा संक्रमण फैलिएको छ, अहिले कस्तो छ अवस्था ?
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६५ जना कोरोना संक्रमित भएका छन् । एकजनाबाहेक सबैलाई सामान्य लक्षण देखिएको छ । एकजनालाई भने अस्पताल भर्ना गरिएको छ । अरूमा चाहिँ सामान्य ज्वरो आउने र हल्का जिउ दुख्ने लक्षण देखिएको छ ।
कहिलेबाट संक्रमण बढ्यो टिचिङमा ?
विगत पाँच दिनदेखि शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । मेडिकल आइसियू वार्डबाट संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको छ । एकजना बिरामीमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सोही वार्डमा कार्यरत सबै कर्मचारी संक्रमित हुन पुगेका छन् । मेडिकल आइसियू वार्डका सबै कर्मचारीलाई कोरोना पजिटिभ देखिएको छ ।
अस्पतालको सेवा प्रवाहमा केही समस्या हुन्छ कि ?
कोरोना देखिएकाले सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या आउँदैन । अहिले व्यवस्थापन भइसकेको छ । मेडिकल आइसियू वार्डमा कुनै पनि बिरामी राखिएको छैन । पजिटिभ आएकालाई कोभिड वार्डतिर सारिएको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको अवस्था हो । यो विगतमा देखिएको डेल्टा भाइरस नभएर नयाँ ओमिक्रोन हो । जसले पाँच दिनमा यति धेरै संक्रमण गराउन सफल भयो ।
टिचिङको सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदैन । बिहानै सबै केसहरूको व्यवस्थापन भइसकेको छ । कर्मचारी घटेकाले लोड केही बढ्न सक्छ, तर कुनै पनि सेवा रोकिँदैन ।
आगामी दिनमा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा संक्रमणको जोखिम त बढ्यो नि ?
यही रूपले संक्रमण फैलिँदै गए तीन–चार हप्ता केस तीव्र रूपमा बढ्छ । त्यसपछि बिस्तारै कम हुन थाल्छ । यसबीचमा सबैलाई संक्रमण हुन्छ । तर, गम्भीर हुने दर डेल्टाजस्तो हुन्छ वा हुँदैन अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । अस्पतालमा बिरामी भर्नादर बढ्न थालेको छ । ६ दिनअगाडिसम्म अस्पतालमा १२ जना संक्रमित भएकोमा हाल अचानक बढेका छन् ।